Naya Bikalpa | स्वस्फुर्त निस्किएको नागरिकको जुलश माथि दमन गरे राजनीतिक दुर्घटना - Naya Bikalpa स्वस्फुर्त निस्किएको नागरिकको जुलश माथि दमन गरे राजनीतिक दुर्घटना - Naya Bikalpa
स्वस्फुर्त निस्किएको नागरिकको जुलश माथि दमन गरे राजनीतिक दुर्घटना
प्रकाशित मिती: २०७७ असार २, १८: २१: ३७
नेपाली कांग्रेशका नेता डा. शेखर कोइराला यतिबेला निकै चर्चामा छन् । डा. कोइरालाले सरकारका गतिविधि देखि संसदसम्मको गतिविधिलाई निकै नजिकबाट नियालिरहेका लकडाउनको समयमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विराटनगरबाटै समसामयिक विषयमा प्रष्ट रुपमा आमनागरिककाबिच आफ्ना भनाइहरू राख्दै आएका छन् । यिनै समसामयिक विषयलाई लिएर हाम्रा विशेष संवाददातासँग डा. शेखर कोइरालाले गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
युवाहरूले सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर चौतर्फी विरोध गरिरहँदा प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेस चाही किन मौन वसेको होला ?
हामीहरू न लुकेर बसेका छौ न सुतेर नै बसेका छौं । अलिकति सुरुमा सुस्त भएको नै हो । अहिले यतातिर आएर चहलपहल हुँदै छ । युवाहरूले गर्नु भन्दा पहिले नै हामीहरूले पि सि आर वाहेक अर्को उपायले डायग्नोसिस हुँदैन भनेर भनेका हौं । म त डाक्टर पनि हो र मैले पटक पटक मन्त्रीहरूलाई पनि भनिरहेको नै हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि खबर दिएकै हो । विभिन्न मिडिया मार्फत पनि पटक पटक भनेको नै हो मैलेमात्रै होइन मलाई लाग्छ सबै स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञहरूले यो कुरा राखेकै हो तर सरकारलाई त अर्कै ध्यावन्न छ । सरकारले पि सि आर र आर डिटिमा भ्रष्टााचार गर्नलाई लकडाउन गरेको ररहेछ । क्वारेन्टाइनलाई अव्यवस्थित ढङ्गले अगाडी बढाउनलाई भ्रष्टाचार गर्नलाई लकडाउन गरेको रहेछ । अहिले प्लेन चाटर्ड गरेर विदेशमा भएका नेपालीहरू ल्याउने कुरामा पनि भ्रष्टाचारको गन्ध आइरहेको छ । राहतमा भ्रष्टाचारको गन्ध आइरहेको छ । सामाग्रीहरू खरिदमा भ्रष्टाचारको गन्ध आइरहेको छ । भन्ने कुरा अब त घाम जस्तै छर्लङ्ग भइसक्यो । मैले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेजीको कुरा पनि सुनेको थिए कि उहाँले त भ्रष्टाचार भएकै छैन भन्नुभएको छ । मलाई त अचम्म लाग्यो । १० अर्ब रुपैया खर्च देखाउनु भएको छ । उहाँहरू नै बसेर क्याविनेटले निर्णय गरेको, छलफल गरेको डब्लु एच ओ र स्वास्थ्य मन्त्रालय बसेर एक जना संक्रमितमा ७ लाख रुपैया लाग्छ भनेर भनेको अनि जब ढाइ हजार संक्रमित थिए अहिले त करिब करिब पाँच हजार पुगिसकेको छ । ढाइ हजार संक्रामित्र हुँदाखेरी सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रीले पाँच मिनेटको रोष्टममा उभिएर १० अबै रुपैया खर्च भयो भनिसके पछि एक जना संक्रमितमा कति खर्च भयो होला भनेर तपाईं आफै पनि अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ ।
त्यसो भए यो सरकारले भ्रष्टाचारलाई चुलिमा पु¥यायो भन्न खोज्नु भएको हो त ?
यो सरकारले गरेको भ्रष्टाचार बुँदागत रुपमा भन्ने हो भने पन एक दिनमा भनेर सकिँदैन । स्वास्थ्य सामाग्रीमा भ्रष्टाचार भएको छ । राहतमा भ्रष्टाचार भएको छ । क्वारेन्टाइनमा भ्रष्टाचार भएको छ । हुँदाहुँदा मलेसियाबाट चाटर्ड उडान गरेर ल्याउने त्यसमा ८० हजार रुपैया प्रतिव्यक्तिले तिर्ने कहाँबाट तिर्छन तिनिहरूले ? कस्तो हालमा छन् तिनिहरू ? नागरिकलाई त्यतिपनि सुविधा नदिन सक्ने सरकार जवाफदेहिता, उत्तरदायिता, पारदर्शिता नहुने सरकार, सरकारमा नबसे हुन्छ । उत्तरदायि पनि नहुने पारदर्शि नहुने, नागरिकलाई सानो सानो सेवा सुविधा पनि दिन नसक्ने हो भने यो सरकार के को लागि ? सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको एउटा कुरा म याद गरिरहन्छु कि म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न र मेरो ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको छैन भन्नु हुन्छ । बर्गाल्ति हाइसक्यो भ्रष्टाचारको चाङमा यो सरकार उभिइसकेको छ । अब के बाँकी छ ? यो सुन्दा सुन्दा कान पाकिसक्यो नेपाली जनताको त्यसैले युवाहरू सडकमा आएका हुन । म त धन्यवाद दिन्छु युवाहरूलाई । यस्तो विषम परिस्थितिमा जब की तीन फिटको सामाजिक दुरि कायम गर्नुपर्ने ठाउँमा किन आए ? हामीहरूले कर तिरेको पैसाबाट सरकार चल्दै छ । यो देश चल्दै छ सरकार चाही भ्रष्टाचारमा लिप्त छ ।
महामारीको समयमा सरकार असफल भयो भने सबै असफल हुने होइन र के भन्नु हुन्छ तपाईं ?
तपाईं यस्ता वाइहात कुरा नगर्नुस् । सरकारलाई सफल बनाउने वा विफल बनाउने भन्ने कुरा नगर्नुस् । सरकारलाई के को सफल बनाउन खोज्दैछ नेपाली कांग्रेस पार्टीले ? सुरु सुरुमा कसैले बोले होलान्, हामीले बोलेका कुराहरू सुन्नुस न । हामीले बोलेका जस्ताको त्यस्ते राखिदिनुस् । हुँदाहुँदा अहिले सेनाले जसरी सामान ल्याएको छ र तपाईंको माक्समा सुकभर, पिपिईमा जति गफला गरेको छ त्यसको कुनै हिसाब किताब छैन ।
सरकार कि त जाग कि त भाग भन्ने नारा सहित युवाहरू सडकमा उत्रिएको कुरालाई उहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
म तपाईलाई भन्दै छु । साढे ६ अरब रुपैया संघिय सरकारले खर्च गर्यो भन्छ । डेढ अर्ब रुपैया प्रदेश सरकारले खर्च गर्यो भन्छ । ढाइ अर्ब रुपैया स्थानिय तहले खर्च गर्यो भन्छ । सुरुमा स्थानिय तहले राहतमा जति खर्च गरेको छ त्यो राम्रो गरेको छ त्यसमा मेरो पनि सहमत छ । तर सरकार त भ्रष्टाचारको चाङ्गमा लिप्त छ । अब मन्त्रीले यस्तो बोले प्रधानमन्त्रीले यस्तो बोले भनेर डिफेन्ट गरेको बस्ने काम छैन । सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेका कुरा घम जस्तै छर्लङ्गै छ । त्यस्तो महामारीमा पनि कसैको कुरा नसुनेर एक्लौटली आफै जान्ने सुन्ने जस्तो गरेर मनलाग्दी निर्णय गर्दै जाँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । यसको जिम्मा ओली सरकारको नै हो । हामी कोही होइनौ हामी त देखेको कुरा भन्ने मात्र हो । विज्ञले भनेको त यो सरकारले मानिरहेको छैन ।
तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १० अर्बको बारेमा प्रष्ट रुपमा भन्नुभएको छ नि अहिले हिसाब किताब नखोज्नुस पछि पाउनुहुन्छ भनेर भनेको कुरालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
हिसाब किताब नखोज भन्ने प्रधानमन्त्री, भ्रष्टाचारको चाङ्गमा उभिने प्रधानमन्त्रीको सरकार अनि उहाँले त्यो कुरा नभने कसले भन्छ त अब हुँदाहुँदा सेनाले पनि जुन सामानहरू ल्याएको छ त्यसमा पनि के हो हुने हो थाहा छैन । तपाईं आफै भन्नुहोस् त यो भन्दा दुर्भाग्य अरु के हुन सक्छ यो देशको निम्ति ? युवाहरूले आरडिटि होइन पिसिआर भन्दैछन् र हामीले पनि पहिलै देखि भन्दै आइरहेका छौं पिसिआर भनेर । सरकार के भन्दै छ भने १५ असार देखि हामी पिसिआर एकदम धमाधम गर्छौं । दश हजार पिसिआर दिनको गर्छौं भन्दा । प्रधानमन्त्री लगायत सबै मन्त्रीले जे जे बोलिरहेका छन् त्यो सबै झुट बोलिरहेका छन् भनेर तपाईंको यस लोकप्रिय पत्रिका नयाँ विकल्प साप्ताहिक मार्फत सम्पूर्ण जनतालाई बताउन चाहन्छु । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेको कुरामा केहि पनि सत्यता छैन ।
उसो भए नेपाली कांग्रेसका सांसदले सदनमा किन विरोध गरिरहेका छैनन् त ?
यस विषयमा सांसदलाई सोध्नुहोस किन विरोध गरेनन भनेर ? म त सांसद होइन सभापतिलाई सोध्नुहोस् यो कुरा किन विरोध गरेनन् भनेर ? तर हामीले भनेका कुराहरू यो सरकारले गरिरहेको छैन । नेपाली कांग्रेसका हामी जस्ता नेताहरूले यस विषयमा बोलिरहेको नै छौं । बोली पनि रहने छौं ।
सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर विरोध गर्न युवाहरू सडकमा उत्रिए पछि गृहमन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरेर नारा जुलुस गर्नेलाई कारवाही गर्न सरकार तयार भएको कुरालाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ ?
तानाशाही सरकारमा यहि त हुन्छ । अधिनायवाद सरकारमा हुन्छ चाही के ? म त पुलिसहरूलाई आग्रह गर्छु कि तपाईंहरू कुनै पनि किसिमको गृहमन्त्रालयले दिएको यस्ता अर्डरलाई नमान्नुस भनेर भन्छु । ति युवाहरू जसले भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर शान्तिपूर्ण जुलुसमा डण्डा हान्ने पानीको फोहोरा हान्ने, खुट्टा भाँच्ने जस्ता कामहरू नगर्नुस् भनेर पुलिसहरूलाई विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु । आन्दोलन अब झन झन बढ्छ । राजा शासन हुँदा पनि यि कुराहरू भएका हुन् । मान्छे जेल जान डराउँदैनन् । यदि भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरा होइन भ्रष्टाचार भइसकेको छ । क्वारेन्टाइन अव्यवस्थित छ । पिसिआरबाट टेष्ट गर भनेर जायज माग राखेर सडकमा आउँदा पुलिसले डन्डा हान्छ भने भोलिका दिनमा अझ धेरै मान्छे जम्मा हुन्छन् । सबै नागरिकहरूले राजनैतीक दलहरूलाई औंला तेस्राउन थाल्छन् र सरकारालई नै सबै तिरबाट आक्रमण हुने सम्भावना बढेर जान्छ ।
२०७७ असार २, १८: २१: ३७